Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Ukungena kwamaselula kuyabuya ezindizeni zeLufthansa
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zaseJalimane • Health News • Izindaba • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Ngesikhathi sokungena kweselula, amakhodi we-QR wezitifiketi zamaphepha manje angaskenwa futhi ngaleyo ndlela ahlolwe ngokushesha nangokushesha.
ILufthansa ibuyisela ukungena kwamaselula ezindizeni ezivela ezindaweni ezingekho engcupheni.
Abahambi futhi bangakhishwa amaphasi abo okugibela ngqo kwi-smartphone yabo.
Ngephasi lokugibela ledijithali, akukho dokhumenti eyengeziwe edingekayo kwikhawunta yokungena.
ILufthansa iphinde inikeze abagibeli bayo inqubo elula yokungena. Kuzo zonke izindiza ezingama-2000 zamasonto onke ezivela ezindaweni ezingekho engcupheni yaseSchengen (ngokwesibonelo ezisuka eSpain, e-Italy noma eSweden, ngokwesibonelo) eziya eJalimane, abahambi bangaphinde banikezwe imvume yabo yokugibela ngqo kwi-smartphone yabo lapho bengena.
Lokhu kwenzeka ngokuqinisekiswa okuzenzakalelayo nokwedijithali kwezitifiketi zokugoma ze-EU, okufakazela ukuvikelwa okugcwele kokugoma, kanye nemiphumela yokuhlolwa kwe-COVID-19 evela elabhorethri yeCentogene.
Ngesikhathi sokungena kweselula, amakhodi we-QR wezitifiketi zamaphepha manje angaskenwa futhi ngaleyo ndlela ahlolwe ngokushesha nangokushesha. Lokhu kusho ukuthi ipasi lokugibela ledijithali lingakhishwa futhi okunye ukubheka amadokhumende ekhawuntareni yokungena esikhumulweni sezindiza akusadingeki.
Kepha kuyasebenza nakwezinye eziningi Lufthansa izindiza: noma ngubani okhathazekile ukuthi akanazo izitifiketi ezifanele zohambo angazihlola nge ILufthansa Service Centre kufika emahoreni angama-72 ngaphambi kokuhamba. Lokhu kungaba ubufakazi bokuhlolwa, isifo se-COVID-19 esisindile kanye nokugoma. Ukuqinisekiswa kwezinhlelo zokusebenza zokungena kwidijithali nakho kungabhekwa ngale ndlela. Ngenxa yezixazululo ezintsha zedijithali, isheke manje seliyazenzakalela ngakho-ke liyashesha kakhulu, naseSikhungo Sesevisi.
Inkampani yezindiza yeluleka izivakashi zayo ukuthi ngaphezu kobufakazi bedijithali, izitifiketi zoqobo eziphrintiwe kusafanele zihanjiswe ohambweni kuze kufike esinye isaziso.